Training (သင်တန်းကျောင်း) - မြန်မာနက် လမ်းညွှန်
There are 6759 listings and 449 categories in our website
Centre I :
189-195, Room 6A, Pansodan Office Tower, Above Fuji Shopping Center, Pansodan Middle Block, Kyauktadar Township, YANGON, MYANMAR.
Ph: 01-254893, 09-31337148.
Centre II :
Room 605, Building 16, Redlink Building, MICT Park, Hlaing Township, YANGON, MYANMAR.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း386
Online Myanmar Computer Training Center
OMCTC အွန်းလိုင်း ကွန်ပျူတာ သင်တန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော အွန်းလိုင်းကွန်ပျူတာ သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတက်ရန် အချိန်မပေးနိုင်သော ဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသူ/သား များနှင့် သင်တန်းတက်ရန်ခက်ခဲသော နယ်မှ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းသင်တန်းတက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးဆက်များမှာ -
(၃) ဘယ်မှသွားစရာမလိုပဲ အိမ်မှာ အင်တာနက် ရှိရုံဖြင့် သင်ကြားနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် အစစအရာရာ သက်သာနေမှာပါ။
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း510
MCF Training Programs
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း308
Since the early 1986, MCC started off as the first ever computer training school in Myanmar and later incorporated Myanma Computer Co., Ltd in 1989 to expand into the ICT related activities other than IT Training.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း442
Capacity Building Intiative
A group of young, intelligent, experienced and energetic people with good educational records including masters from Myanmar and International Universities belongs to CBI. Besides, they are also receiving capacity and skill training and workshops continuously from famous institutions and individuals inside and outside of the country. They all share the core value of “quality” and “accountability”.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း374
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း613
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း396
KLC Computer Centre
The entry page to Myanmar MCC's Web Site. ICT, Computer, Training, Business Solution, Support. The Leading ICT Company in Myanmar (Burma).Myanmar owned company for providing total IT solution for ICT. Current Project for browser base application are Entertainment,Music,Songs,Mp3,Video. Web Portal for Yangon City, Myanmar Entertainment (Music,Songs,Mp3,Video,fun club), Myanmar Gems and Jewellerys, Myanmar Golf, Myanmar Home Finder, Myanmar Video
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း476
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း377
custom training program for our customers only
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း424
Web Development (ဝဗ်ဆိုက် တည်ဆောက်ရေး) (74)